Burburka DFKMG ee 2aad ma waxaa horseeday shirarkii Brussels iyo Istanbuul? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Burburka DFKMG ee 2aad ma waxaa horseeday shirarkii Brussels iyo Istanbuul?
Burburka DFKMG ee 2aad ma waxaa horseeday shirarkii Brussels iyo Istanbuul?
Waxaa markale soo shaac baxay khilaaf balaaran oo ka dhex dhashay masâ€™uuliyiinta dowlada Federaalka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya, khilaafkan oo u muuqda mid horey usoo maray dowladan isla markaana horseeday burburkii xukuumadii hore ee DFKMG ee uu hogaanka u hayey Cabdullahi Yusuf Axmed, ayaa u muuqda hadana inuu keeni karo burburka xukuumada iyo dowlada hada jirta.
Hadaba khilaafka maanta ku yimid Dowlada uu Madaxweynaha ka yahay Shiikh shariif Axmed, xagee buu salka ku hayaa muxuuse uga duwan yahay khilaafkii soo kala dhexgalay Xukuumadihii Prof.Cali Maxamed Geedi, Nuur Cadde iyo Madaxweynihii hore ee Cabdullahi Yusuf Ahmed?
Inteenan u dhaadhicin jawaabta suâ€™aashaasi waxaa muhiim ah in wax yar aynu ka taabano khilaafkii kan ka horeeyey ee burburiyey Xukuumadii uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdullahi Yusuf Axmed, uuna Raysalwasaaraha ka ahaa Nuur Xassan Xuseen (Nuur Cadde).
Dowlada Federaalka kumeel gaarka Soomaaliya ee lagu soo dhisay dalka Kenya sanadkii 2004, ayaa ahaa mirrihii shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee muddada 2da sano ah ka socday magaalada Eldoret iyo Mbghati, dalkaasi Kenya.
Shirkaasi ka dhacay Kenya ayaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa kii ugu balaarnaa oo ay isugu yimaadaan dhamaan kooxihii iyo maamuladii isku hayey dalka Soomaaliya marka laga reebo Somaliland.
Shirkan ayaa waxaa markii ugu horeysay isa soo horfariistay kooxihi ku dagaalamayey koonfurta Soomaaliya iyo maamulkii Puntland iyo waliba dowladii hore ee lagu soo dhisay Carte dalka Jabuuti ee uu Madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xassan.
Natiijada shirkaasi dib u heshiisiinta ayaa la oron karaa waxay ahaayeen sadex arrimood oo muhiim ah oo bilow u noqon karay heshiisiinta kooxaha Soomaalida iyo dhismo dowlad loo wada dhan yahay.
In la sameeyo Axdi kumeel gaar ah oo saldhig u noqda Dowlada la dhisayo
In la sameeyo Baarlamaan iyo guddoonkiisa
In la doorto Madaxweyne magacaaba Raysalwasaare lana dhiso Xukuumada Kumeel gaarka ah
Hadaba sadexdan qodob waxaa ugu muhiimsanaa Axdiga Kumeel Gaarka ah ee lagu dhisay shirkaasi kaasi oo udub dhexaad u noqday habkii ay Dowlada kumeel gaarka ah ku shaqeyn lahayd isla markaana lagu qeexay awoodaha kala gedisan ee sadexda qeybood ee dowladu ka kooban tahay:
Waxaa sidoo kale Axdigan lagu qeexay awoodaha Madaxweynaha uu leeyahay, Raysalwasaaraha iyo xukuumadiisa iwm.
Habka ay doorteen kooxihii isugu yimid shirkii Kenya ayaa ahaa in dowlada la dhisayo ay noqoto mid awoodeedu uu leeyahay Baarlamaanka (Dowlada Baarlamaani ah), maadaama aysan shacabka codeyn karin, isla markaana la doonayo in koox gaar ah aysan awooda maroorsan, ayey isku raaceen in Baarlamaanka ay Qabaaâ€™ilkii Soomaaliya sameysteen uu noqdo marjaca ama awooda ugu sareysa ee Dowlada.
Tan iyo intii lasoo dhisay Xukuumadii Prof.Cali Maxamed Geedi waxaa jiray khilaafyo kala gedisan oo dowlada soo kala dhexgalay, kuwaasi oo salka ku hayey murran la xariira siyaasada, danaha beelaha iyo waliba dhaqaale oo soo kala dhexgalayey madaxda sare ee Dowlada.
Khilaafkii ugu danbeeyey ee horseeda burburkii xukuumadii Kumeel gaarka ahayd ayaa salka ku heysay murrankii soo kala dhexgalay Madaxweynihii hore Cabdullahi Yusuf Axmed iyo Nuur Cadde oo xiligaa ahaa Raysalwasaaraha DFKMG.
Bartamihii sanadkii 2008, ayey ahayd markii Nuur Cadde iyo Cabdullahi Yusuf khilaafkooda sii xoogeystay, xiligaasi uu Madaxweynaha ku dhawaaqay in uu xilka ka qaaday Raysalwaasaraha Nuur Cadde, hase yeeshee goâ€™aankaasi waxaa ku gacan seeray Nuur Cadde oo sheegay in sharciyan uu asaga xilka laga qaadi karo oo kaliya markii Baarlamaanka codka kalsoonida kala noqdo Raysalwasaaraha.
Nuur Cadde oo ka hadlayey Xil-ka qaadistii uu ku sameeyey Madaxweyne Cabdullahi Yusuf ayaa sheegay in Axdiga uu qorayo in Madaxweynaha uu Raysalwasaaraha magacaabi karo balse uusan xilka ka qaadi karin.
Dhegayso Nuur Cadde oo sheegay in uu yahay Raysalwasaaraha Sharciga ahÂ Dec. 2008 BBC [powerpress: url=”https://horseedmedia.net/wp-content/uploads/2010/05/nuur_cadde_2008.mp3″]
Axmed Wallad Cabdalla iyo Beesha Caalamka
Beesha Caalamka oo uu xiligaasi horboodayey Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Axmed Wallad Cabdallah, ayaa ku taageeray Nuur Xassan Xussen (Nuur Cadde) inuu sharciga ku taagan yahay oo xilka uu ka qaadi karo oo kaliya Baarlamaanka sida uu qorayo Axdiga kumeel gaarka ah ee DFKMG.
Arrintan ayaa markii danbe keentay in Madaxweyne Cabdullahi Yusuf Axmed xilka iska casilo, ayadoo Dowlad cusub oo lagu daray kooxihii Asmara fadhigoodu ahaa lagu soo dhisay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, shirkaasi oo uu qeyb libaaxleh ka qaaday Nuur Cadde oo xiligaasi Madaxweyne isu soo sharaxay, walow Shiikh Shariif Axmed oo xiligaa ahaa hogaamiyaha Kooxdii Asmara uu kusoo baxay doorashada Madaxtinimada.
Shirkii Jabuuti ee horaantii sanadkii 2009 ayaa waxaa sidoo kale qeyb qaatay Baarlamaanka Soomaaliya oo uu hormuud ka ahaa Shiikh Aadan Madoobe, ayadoo Baarlamaanka Soomaaliyana lagu daray 275 xildhibaan cusub oo ka socda garabka Isbaheysigii Asmara ee dowlada lagu soo dhafay.
Shiikh Shariif Axmed oo xiligaasi Raysalwasaare u magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, ayaa Baarlamaanka wuxuu si aqlabiyad ah ku ansixiyey Cumar Cabdirashiid inuu noqdo Raysalwasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Hadaba khilaafka hada soo kala dhexgalay Madaxweyne Shiikh Shariif Axmed iyoÂ Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa ah mid lamid ah kii soo dhexgalay Cabdullahi Yusuf iyo Nuur Cadde.
Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa asagu sheegay in xil ka qaadista Shiikh Shariif ku dhawaaqay uu garab maray Axdigii DFKMG, asagoo heysta qodobada Axdiga kumeel gaarka ah lagu qeexayo awooda Madaxweynaha uu leeyahay iyo qaabka Raysalwasaaraha xilka looga qaadi karo.
Walow ay cadahay in qodobakan uu sharciyan ku saxsan yahay Raysalwasaaraha DFKMG Cumar Cabdirashiid siduu ugu saxsanaa Nuur Cadde, ayaa waxaa la yaab noqotay taageerada uu ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Axmed Wallad Cabdallah si deg degleh ugu taageeray Shiikh Shariif goâ€™aankiisa.
Dad badan ayaa is weydiinaya suâ€™aalaha ah:
Maxaa keenay in Axmed Wallad Cabdallah inuu had iyo goor ku dhex jiro khilaafyada soo kala dhexgala Madaxda sare ee dowlada?
Kaalin intee la eg ayuu ku leeyahay Wallad Cabdallah murranka siyaasadeed ee ka dhex jira DFKMG?
Axmed Wallad Cabdallah shalay Nuur Cadde wuxuu ku taageeray inuu sharciyan Baarlamaanka xilka ka qaadi karo, halka maanta uu Cumar Cabdirashiid ku taageeray in xilka laga qaado, Axdigii DFKMG ma wuxuu noqday â€œla jiifiyaa banaan la joojiyaa banaan..â€?
Maxaa ku khasbay Axmed Wallad Cabdallah inuu si deg degleh oo saacado kooban gudahood uga hadlo xil ka qaadisay Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid, xili uusanba jawaab ka bixin goâ€™aankii kasoo baxay Xafiiska Madaxweyne Shiikh Shariif Axmed?
Dhegayso raysalwasaare Sharmarke oo sheegay in uu yahay Raysalwasaaraha Sharciga ah [powerpress: url=”https://horseedmedia.net/wp-content/uploads/2010/05/cumar_cabdirashiid.mp3″]
Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa asagu maanta shaaca ka qaaday in xilka aan laga qaadin, oo qaab sharci ah aan loo soo marin, asagoo sheegay in xilkii uu sidiisa u hayo, shir jaraaâ€™iid oo uu ku qabtay Xarunta Madaxtooyada ayaa waxaa kasoo qeyb galay inta badan Golaha Wasiirada ee xukuumadiisa, marka laga reebo wasiiro kooban oo ku dhaw Madaxweyne Shiikh Shariif Axmed.
Wasiiradaasi ka maqnaa kulankaasi Xukuumada yeelatay ayaa waxaa kamid ahaa Shariif Xassan Shiikh Aadan Wasiirka Maaliyadda ahna Raysalwasaare kuxigeen, kaasi oo la hadal hayo in Madaxweyne Shariif si aad ah isugu dhaw yihiin, laguna tuhmo in uu goâ€™aanka kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha uu lug ku leeyahay, xili la isweydiinayo dhaqaale badan oo dowlada ku maqan halkii uu mariyey Wasiirka Maaliyada Shariif Xassan.
Shariif Xassan ayaa in muddo ah watay qorshe uu ku doonayo in dalka Soomaaliya lacagteeda ku bedalo mid cusub uu asagu iskiis heshiis ulla galay shirkado shisheeye, arrimahan oo qeyb ka ah xurguf xoogan oo la sheegay inay soo kala dhexgashay Raysalwasaaraha Cumar Cabdirashiid iyo Wasiirka Maaliyada Shariif Xassan.
Shariif Xassan ayaa asagu ahaa Wasiirkii heshiiska kula galay shirka shisheeye in ay maamusho lacagihii dowlada Soomaaliya loogu deeqay shirkii Brussels ee bishii April 2009 ka dhacay dalkaasi Belguim, ayaa horey Baarlamaanka ugu dhaliileen inuusan heshiisyadaas soo hordhigin Baarlamaanka.
Dhamaan heshiisyadan iyo kuwo kale oo badan oo uu shaqsiyan saxiixay wasiirka Maaliyada ayaa la sheegay inuu taageero kaga helay xafiiska Madaxweynaha DFKMG Shiikh Shariif Axmed, arrintan oo sii xoojisay murranka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha.
Axmed Wallad Cabdallah Brussels iyo Istanbuul !
Marka laga yimaado khilaafkan oo ah mid aan ku cusbeyn dowlada kumeel gaarka ah, ayaan hada waxaa muddan in wax badan la iska weydiiyo xiliga lagu soo beegay goâ€™aanka uu ku dhawaaqay Madaxweyne Shiikh Shariif Axmed.
Madaxweynaha Dowlada Federaalka Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, Shiikh Shariif Axmed ayaa goâ€™aankan shaaciyey xili uu isu diyaarinayo inuu ka qeyb galo shirka Caalamiga ah ee Dhaqaalaha (Dib u dhiska Soomaaliya) loogu aruurinayo dalka Soomaaliya, kaasi todobaadkan ka dhici doona magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Shirkan waxaa qaban qaabadiisa leh Axmed Wallad Cabdallah oo ah ergayga Qaramada Midoobay qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, asagoo horey shir noocaan ah uga abaabulay xarunta Midowga Yurub ee Brussels sanadkii 2009, shirkaasi oo dhaqaale ka badan 250 milyan oo dollar dalka Soomaaliya loogu deeqay.
Hadaba Axmed Wallad Cabdallah oo asagu in muddo ah Siyaasada Beesha Caalamka ee ku aadan Soomaaliya siyaabo kala gedisan u haga ayaa la isweydiinayaa kaalinta uu ku yeelan karo khilaafyada burburka ku keenta DFKMG.
Horey ayey u jireen arrimo badan oo musuq maasuq ah oo dowlada Soomaaliya lagu eedayn jiray kuwaasi oo salka ku haya dhaqaalaha caalamka ugu deeqo Soomaaliya oo mara meelo daahsoon isla markaana aan gaarin meelihii loogu talo galay.
Waxaana horey u jiray Shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Brussel ee dalka Belguim kaasi oo soo maaliya loogu deeqay lacag gaareysa 250 milyan oo dollar, dhaqaalahaasi oo aan illaa iyo hada la ogeyn meeshii ay mareen.
Hadii Madaxweynaha uu kala diray Xukuumadii dalka, qaab caynkee ah buu shirkan muhiimka ah ee Istaanbuul uga qeyb galayaa?Â Maadaama uu Xukuumadii kala diray Ma Madaxweynaha kaligiis baa ka qeyb gelin oo Dalka Soomaaliya mateli doona? Habkee buu Shiikh Shariif Axmed caalamka uga hadli doonaa dib u dhiska Soomaaliya, hadii ay burbur ku sugan tahay Dowlada aan 2da sano buuxsan ee uu hogaanka u hayo oo hada khilaafkii ugu weynaa lasoo gudboonaaday?
Shirkan Istanbuul ee dhaqaalaha loogu aruurinayo Soomaaliya waxaa la oron karaa wuxuu soo dadajiyey burburka dowlada DFKMG oo horey murrankii uga dhashay shirkii Brussels ku kala fogeysay Labo shariif iyo Raysalwasaaraha.